ဝငျနီ – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
637675 Views so far
စာရေးသူ - : ဝငျနီ
အောကျတိုဘာ 13, 2019 နေ့
ဇူလိုငျ 23, 2019 နေ့
Photo – သီရိမေ
အိမ်တစ်လုံးတည်ဆောက်ပြင်ဆင်ရာမှာ အခန်းကဏ္ဍများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့က ဒီကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေတဲ့ သူများအားလုံးရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပါပဲ။ မိမိ သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍကို ရုပ်လုံးဖော်၊ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ မတူညီတဲ့ စိတ်ကူးတွေ၊ အမြင်တွေကို ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကိုတစ်သားတည်း ဖြစ်စေဖို့ ညှိနှိုိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလျှင် ရည်မှန်းချက်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်မှာပါ။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဝေမျှနိုင်ဖို့အတွက် အိမ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းများစွာကို ရေးဆွဲဖန်တီးပေးခဲ့သူ အောင်မြင်သော interior designer တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူ MOPA Design မှ interior designer ကိုကျော်မိုးဝေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့တာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
MOPA Design မှ interior Designer ကိုကျော်မိုးဝေနဲ့ ပြောဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေက်တော့ – ဒီနေ့ Myanmar Home & Decor နဲ့အင်တာဗျုးလေးမှာ ကျွန်တော် ရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့ ပရောဂျက်လေးကတော့ Residense ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မန္တလေးက Eternal Villa သို့မဟုတ် ထာဝရစံအိမ်ဆိုတဲ့ ပရောဂျက်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီပရောဂျက်လေးကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတော့ဒီပရောဂျက်လေးမှာပါတဲ့ design development process က စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်၊ ကိုယ့်အတွက်လည်း ဒီပရောဂျက်ကနေပြီးတော့ ထပ်ပြီးလေ့လာခွင့်ရတဲ့ ပညာတွေ ရှိခဲ့တယ် ဒါကြောင့် ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့ စပြီးအပ်လာတဲ့နေရာကနေ စပြီးပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီဇိုင်းမဆွဲခင် ဒီအိမ်မှာ နေမယ့် မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အမေးအဖြေလေးတွေ လုပ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိသားစုဝင်တွေ နဲ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးကတော့ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဖေ ပေါ့။ အန်ကယ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှာ အန်ကယ်လ်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ သူလိုချင်တာတွေကိုပြောပြပါတယ်။ ကိုယ့်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဒီဇိုင်းဆွဲခွင့်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေ အားလုံးကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးတယ် ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်အတွက်က ဒီပရောဂျက်မှာ လုပ်ရတာ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ်။
Client ကြောင့်တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအိမ်မှာ ဘယ်သူတွေ နေမလဲ မေးတဲ့ အခါတော့ အန်ကယ်လ်က ဒီအိမ်က သူ့ဘ၀အတွက် ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်ချင်တယ်။ ခမ်းခမ်းနားနား ဖြစ်ချင်တယ်၊ ပြီးတော့ ဒီအိမ်သည် တကယ့် တကယ်ကျတော့ အန်ကယ်လ်ကြီးက သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူအတွက်ကို ဆောက်လုပ်ပေးထားတာ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က တကယ်နေမယ့်သူဖြစ်တဲ့ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ သမီးနဲ့ပါ တွေ့ဖို့ လိုအပ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ သမီးနဲ့ သွားတွေ့ရပါတယ်။ သွားတွေ့ပြီးတော့ သူလိုချင်တာလေးတွေ မေးမြန်းတယ်၊ ဒီလိုမေးမြန်းပေးဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း သမီးဖြစ်သူက တော်တော်လေး ကျေးဇူးတင် ၀မ်းသာခဲ့ပါတယ်။ သူလိုချင်တာလေးတွေ သိလာတဲ့အခါကတော့ ကိုယ့်အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားပါတယ်။
client နဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ အခါမှာ ­ဒီအိမ်အတွက် ဒီဇိုင်းစတိုင်လ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ စဉ်းစားရပါတယ်။ တည်နေရာသည် မန္တလေးဖြစ်တယ်၊ ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ အဓိက လုပ်ကိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းကလည်း ရွှေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော်က ဒါကို အဓိကထား စဉ်းစားထားတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးတို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်တာ ပါရမယ်။ တည်နေရာကို ထင်ဟပ်စေမယ့် အရာလေးတစ်ခု ပါရမယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီဇိုင်းလေးက ဘယ်လို ပုံစံကို သွားထားလဲ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ကြည့်ရပါတယ်။ ကြည့်ပြီးတော့ ဒါတွေ အားလုံးပေါင်းပြီတော့မှ Design Style တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီး က အဓိက ကျွန်းသစ်ကိုပဲ သုံးချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အန်ကယ်လ်က ကျွန်းသစ်ကို သုံးချင်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ခေတ်မီတယ်။ ကျွန်းသစ်ကို သုံးနေကျ ပုံစံမျိုးကို သူ မသုံးချင်ဘူး။ ခန့်ခန့်ထည်ထည်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်၊ သူများနဲ့လည်း မတူချင်ဘူး ဘယ်လို ပြောင်းသုံးလို့ရမလဲ အဲ့လိုလေး ရှိတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရတယ်။ ပြင်သစ်က ဗာဆိုင်းနန်းတော် ကို inspire ယူဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ပြင်သစ်က ဗာဆိုင်းနန်းတော်ကတော့သစ်ကို မသုံးထားဘူး။ Classic ပုံစံကို သုံးထားတယ်။ သူ့မှာ wall panel တွေ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကို ပြန်ကူးတဲ့ အချိန်ကျတော့ ဒီ wall panel အခံတွေကို ပြန်ယူထားတယ်။ ပြန်ယူထားတယ် ဆိုပေမယ့် သူကတော့ အခက်အလက် ကနုတ်တွေ အများကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဘက်ကို ပြန်ကူးတဲ့ အချိန်မှာ အဲ့ဒီလောက်ထိ ကနုတ်တွေ မထည့်ချင်ဘူး။ Neo classic ပုံစံမျိုးလေး သွားချင်တဲ့ အခါကျတော့ ခုန ပြောတဲ့ ကနုတ်တွေ အခက်အလက်တွေကို လျော့ချပစ်လိုက်တယ်။ ဗာဆိုင်းနန်းတော်က panel ရဲ့ ဟန်ကို ယူလိုက်တယ်။ မြန်မာမှုဖြစ်တဲ့ ရွှေကျောင်းတို့၊ မန္တလေးနန်းတော်တို့ နောက်ပြီး မန္တလေးမှာ ရှိတဲ့ ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦတွေ လေ့လာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီကနေမှ တချို့ element လေးတွေကို inspire ယူပြီးတော့မှ ဒီအိမ်မှာ ပြန်ထည့်ပေးထားတယ်။
ခြံဝန်း Landscape ဒီဇိုင်း၊ ခြံစည်းရိုးနဲ့ ရေကူးကန် ဒီဇ်ိုင်းတွေကလည်း exterior ဒီဇိုင်းနဲ့ ဟန်ချက်ညီအောင်ရယ်၊ client ရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာလိုအပ်တဲ့ design documentation တွေ ပြင်ဆင်တဲ့ အဆင့်တွေတော့ ရှိတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အတွင်းဒီဇိုင်းမှာ အရေးကြီးတာတစ်ခုက ဘာပါလာလဲဆိုတော့ finishing ပိုင်းတွေက အရေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့ furniture ၊ furnishing ၊ fixture ပိုင်းတွေ အဲ့ဒါတွေက အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းမှာပါတယ်။ အိမ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီဆိုတဲ့နေရာမှာ space planning ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ ဒီအိမ်ကို space planning လုပ်တဲ့နေရာမှာ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်လို့ သူတို့လိုချင်တဲ့ space ကိုထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
နောက် ဒုတိယ အချက် fixture and furnishing အပိုင်းပေါ့။ ဒီအပိုင်းမှာ အန်ကယ်လ်ကြီးကို ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးရတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီး ဒီအပိုင်းမှာ ဘတ်ဂျက်ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က သုံးမယ့် ဘက်ဂျက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်ရတယ်။ တခါတလေ ကျရင် client တွေက interior design လုပ်ရင် ဘက်ဂျက်ရှိမှဆိုတဲ့ အတွေးလေးတစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ အဲ့ဒါက မဟုတ်ပါဘူး။ အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ပဲ ရှိရမယ်။ သုံးမယ့် ဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး furniture ရွေးချယ်ရမယ်၊ furniture မှာ သုံးမယ့် material တွေ ရွေးချယ်ရမယ်။ ဒီတော့ သူရဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ ဘတ်ဂျက်ပေါ်မူတည်ပြီး လိုက်ဖက်တဲ့ ဒီဇိုင်းတော့ ရှိကိုရှိတယ်။ ဒီဇိုင်းထွက်ကို ထွက်တယ်။
အန်ကယ်လ်ကြီးက သူက ထူးခြားချင်တယ် ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ အန်ကယ်လ်ကြီးကို မေးရတယ်။ ဘတ်ဂျက် ဘယ်လောက်သုံးမှာလဲပေါ့။ သူက လစ်မစ်တော့ ထားထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးသင့်တဲ့ ဟာကျရင်တော့ သုံးမယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့ သဘောပေါက်ပြီဆိုတော့ furnitrue အပိုင်းတွေကို ကျွန်တော်တော်တို့ ဘန်ကောက်မှာ သွားဝယ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီဇိုင်နာတွေက brand တွေကို သိထားရတယ်။ brand တွေကို high quality ရှိတဲ့ brand တွေ၊ middle rate ရှိတဲ့ brand တွေ၊ low rate ရှိတဲ့ brand တွေ အကုန်လုံးကို သိထားရတယ်။ သိထားတော့မှ ကိုယ့်ပရောဂျက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့လိုက်ဖက်တဲ့ brand ကို ပြန်ပြီးတော့ ချပေးရတာပေါ့။ အဲကတော့မှပဲ ပရောဂျက်မှာ client သုံးချင်တဲ့ အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ design လေးကလည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ထွက်လာလိမ့်မယ်။ ဘန်ကောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ သွားရွေးချယ်တဲ့ အခါကတော့ အန်ကယ်လ်ကြီးကို အရင်ဆုံး high rate brand ကို ပြလိုက်တယ်။ တကယ်တကယ့်တော့ ဈေးကတအားကြီးတယ် ၊ အန်ကယ်လ်ကြီးတို့လည်း သိတယ်။ ဒါပေမယ့် look နဲ့ ပြန်ယှဉ်တယ် ၊ middle rate ရဲ့ look နဲ့ ယှဉ်တယ်၊ low rate ရဲ့ look နဲ့ ယှဉ်တယ် ဒီအချိန်မှာ look က ပြောစရာမလိုအောင် သိသိသာသာ ကွာသွားတယ်။ ကွာတယ်ဆိုတဲ့ အခါကတော့ အန်ကယ်လ်ကြီး တို့ကတော့ high rate ကို သုံးမယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ် ဖြစ်တာက Christopher Guy ။ Christopher Guy ဆိုတာက furniture designer ပါ။ သူ့ကိုယ်ပိုင် brand ကို တည်ဆောက်ပြီး ထုတ်ထားတဲ့ brand ။ ဒီတော့ ဒီအိမ်က furniture တွေ အတော်များများသည် Christopher Guy ရဲ့ furniture တွေများတယ်။
ဒီပရော့ဂျက်မှာကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အသိပညာက ဒီဇိုင်နာ တစ်ယောက်အတွက် အဓိက ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းက ကိုယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို အပြင်မှာ ရုပ်လုံးပေါ်ဖို့ကြိုးစားရတာက အခက်အခဲဆုံး အလုပ်ပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကြားထဲမှာ တည်ဆောက်နေစဉ်ကာလမှာ client သည် စိတ်ပြောင်းလဲတာ ရှိရင်ရှိမယ်၊ သူလိုချင်တာ ထပ်ဖြည့်တာ ရှိကောင်းရှိမယ်။
ကိုယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲဆိုတာကို အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ ပြန်လည် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးရတာတွေ ရှိတယ်။ ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်း မပျက်အောင် ကိုယ်ကဘယ်လို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမလဲ ။ အင်ဂျင်နီယာတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို supportingအများကြီးပေးပါတယ်။ ဒီပရော့ဂျက်မှာ အင်ဂျင်နီယာက ကိုထွန်းသက်ဦးပေါ့။ အဓိက interior အတွက် ကိုထွန်းသက်ဦးကတာဝန်ယူပေးတယ်။
နောက်ထပ် ထူးခြားတာလေး တစ်ခုက တစ်ရက်မှာ အန်ကယ်လ်ကြီးဆီက ဖုန်းလာတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကနေ ဖုန်းရွှေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံဥာဏ်လေးပေးသွားတယ်ပေါ့။ ကိုယ် အတွင်းဒီဇိုင်းဝင်တဲ့ အချိန်မှာ structure က တည်ဆောက်ပြီးသွားပြီ။ ဒီချိန်မှာ အန်ကယ်လ်ကြီး ဆီက ဖုန်းလာတယ်။ သားရေ … ဒီလှေကားနဲ့ အိမ်ဝင်ပေါက်နဲ့က တည့်ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါသည် မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒါကို ဘယ်လိုမျိုး ပြန်ပြီး ပြောင်းလို့ရမလဲ … ပေါ့ ကျွန်တော့်ကို ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော် ပြန်ကြည့်တော့ ဟုတ်တယ်၊ တည့်ဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ အရင်အခန်းဖွဲ့ကို ကျွန်တော်က ပြန်ပြင်လိုက်တယ်. ဒါပေမယ့် ဒီမိန်းဝင်ပေါက်နဲ့ လှေကားကိုကျ structure က ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ပြန်ပြင်လို့ မရလိုက်ဘူး။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒါကို ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင် ဖြိုရဖျက်ရတာတွေလည်း တအားများတော့မယ်၊ အချိန်ကာလ အနေနဲ့လည်း သတ်မှတ်ထားတာထပ်တဲ့ ပိုကျော်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါ ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ ကိစ္စ တစ်ခုမှာ အဖြေတစ်ခုကတော့ရှိမယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော် ဖုန်းရွှေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ website မှာ ရှာတယ်၊ စာအုပ်တွေဖတ်တယ်။ ဒီမှာသွားတွေ့တယ်။ မှန်တယ် လှေကားနဲ့ ၀င်ပေါက်နဲ့ တည့်ဖြစ်လို့မရဘူး။ တည့်ဖြစ်ရင် အပြင်ဘက်က ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းတွေက အိမ်ထဲကို ၀င်လာနိုင်တယ်၊ အိမ်ထဲက ကောင်း ခြင်းတွေ ကလည်း အပြင်ဘက်ကို ထွက်သွားန်ိုင်တယ်။ ဒီဟာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းလို့ ရလဲဆိုတာလည်းတခါတည်း ရေးပေးထားတယ်။ ကျွန်တော် ကံကောင်းတာ တစ်ခုက လှေကား နဲ့ မိန်းဝင်ပေါက်ကြားမှာ အခန်း ၂ခု ရှိတယ်။
လှေကား ဆင်းဆင်းချင်းမှာ foyer လေး ကျွန်တော် လုပ်ပေးထားတယ်၊ အဲ့ ဒါ ပြီးမှ ထမင်းစားခန်း ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါက ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အန်ကယ်လ်ကြီးက အရင် စစချင်းအိမ်ကို exterior ဆွဲတဲ့ အချိန်မှာ သူရဲ့ ၀င်ပေါက် က တခြား တစ်ဘက်မှာ ရှိတာ။ ထမင်းစားခန်းဘက်က မိန်းဝင်ပေါက်မဟုတ်ဘူး။ outdoor dinning လေး လုပ်မယ်ဆို ထွက်လို့ ရအောင်သူက ၀င်ပေါက်လေးတစ်ခု လုပ်ပေးထားတာ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ပလန်က ပြောင်းသွားတဲ့ အခါမှာ ဘေးဘက်က အကွက်ကို landscape လုပ်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ၀င်ပေါက်က နှစ်ခု ဖြစ်သွားတာပေါ့။ မိန်းဝင်ပေါက်က တစ်ခုရှိတယ်၊ တခါ ထမင်းစားခန်း ဘက်က မိန်းဝင်ပေါက်ကတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်က အခန်းဖွဲ့လုပ်တော့ လှေကားက ဆင်းရင် foyer ရှိတယ်၊ ပြီးမှ ထမင်းစားခန်း ရှိမယ်။ ပြီးမှ မိန်းဝင်ပေါက်က လာတယ် ဆိုတဲ့ အခါကတော့ ဒါလေးက အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ ဖုန်းရွှေ အရ လှေကားနဲ့ မိန်းဝင်ပေါက် က ဆယ်ပေ အကွာမှာ ရှိရင်ဆိုတဲ့ အချက်လေးတစ်ခုပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာက ဆယ်ပေ မကဘူး။ ပေ သုံးဆယ် ၀န်းကျင်လောက်ကို ကျယ်နေတယ်။ ဒါလေးက အားသာချက်တစ်ခု၊ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်က လှေကားဆင်းဆင်းချင်း foyer ဧရီယာမှာ ခရစ်စတယ် မီးဆိုင်းကြီးတစ်ခုကို ထားမယ်။ ဖုန်းရွှေရဲ့ နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုကလည်း တကယ်လို့ ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ မလွယ်တော့ဘူး ဖြိုဖို့ဖျက်ဖို့လည်း မလွယ်တော့ဘူးဆိုရင် အလည်မှာ မီးဆိုင်းတစ်ခု ထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့ ဖြေရှင်းချက်လေးပါလာတယ်။ မီးဆိုင်းက reflection ပါတာကိုး။ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေက ဘက်ပြန်သွားမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကလည်း နဂိုတည်းက ဒီနေရာမှာ မီးဆိုင်းထည့်မှာဆိုတော့ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်က အန်ကယ်လ်ကြီးကို ရှင်းပြတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုက သင့်တော်ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်သာပေး သူလက်ခံတယ်။ သူက အတင်းကြီးလိုက်မပြင်ဘူး။ သူပြင်ချင်တယ်ဆို ကျွန်တော်နဲ့ တိုင်ပင်တယ်။ ဒါကို ပြင်ရင်ကောင်းမလား ပိုကောင်းသွား မလား တိုင်ပင်တယ်။ အကြံဥာဏ်ယူတယ်။ အဲ့အခါ ကျွန်တော်ကလည်း သေချာပြောပြရတယ်။ မပြင်ချင်ဘူးဆိုရင် သင့်တော်ခိုင်လုံတဲ့အဖြေကို ရှင်းပြရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မရဘူး မပြင်ဘူးဆိုတာမျိုးသွားပြောလို့မရဘူး။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လို client မျိုးမဆို စိတ်ကျေနပ်မှု ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူလုပ်ချင်တာကို လုပ်မှာပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီဇိုင်နာဘက်ကနေပြီး ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက် ပေးရတယ်၊ရှင်းပြပေးရတယ်။ client တွေကလည်း ဒါကို စဉ်းစားတယ်။ လက်ခံသင့်တယ် ထင်ရင် လက်ခံတယ်ပေါ့။ ဒီလို မျိုး ညှိနှိုင်းပြီး သွားကြရပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ပြောတာလေးရှိတာက Design concept အရ ကျွန်တော် ဗာဆိုင်းနန်းတော်က wall panel နဲ့ မြန်မာရဲ့ ဗိသုကာအဆောက်အဦးမှာ ရှိတဲ့ wall panel နဲ့ ပြန်ပြီးတော့ ရောစပ်ထားတယ်။ နောက်ထပ် ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွလေးတွေကိုလည်း ကျွန်တော်သုံးထားတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ focus က ဘာလဲဆိုတဲ့ အခါကတော့ သူက မိန်းဝင်ပေါက်က ၀င်လိုက်တဲ့ အခါနံရံကြီးတစ်ခု ရှိတယ်။ ဒီ နံရံ ကြီးသည် မိန်းဝင်ပေါက်ဖြစ်တာကြောင့် ၀င်လိုက်တာနဲ့ကို ထူးခြားနေရမယ်။ ဆိုတော့ ဒီ နံရံ ကို ဘာလုပ်မလဲ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းးစားရတာပေါ့။ အိမ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပါတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးကလည်း မြန်မာ ၊ မြန်မာဖြစ်ရတာလည်း ဂုဏ်ယူတယ် ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ ဒီနေရာမှာ ပုံတစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့။ နံရံဆေးရေးပန်းချီသွားမလား၊ ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွ သွားမလား ကျွန်တော် စဉ်းစားတာပေါ့။ ကျွန်တော်က မန္တလေးမှာ လေ့လာတဲ့ အခါ ဆေးရေးပန်းချီတွေ တွေ့တယ်၊ ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွတွေလည်း တွေ့တယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ ဘာကို သဘော အကျဆုံးလဲဆိုဆော့ ရွှေကျောင်း ။ ရွှေကျောင်းရဲ့ ဗိသုကာဟန်တွေ ၊ အတွင်းမှာ လုပ်ထားတဲ့ အပြင်အဆင်တွေ သဘောကျတယ်။ တံခါးမှာ ထည့်ထားတဲ့ ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွလေးတွေ အရမ်းသဘောကျတယ်။ အဲ့ဒီ အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်က ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွ ထည့်လိုက်တယ်။ ပြောရရင်တော့ ဒီအိမ်က ရွှေကျောင်းကို အများကြီး inspire ယူထားတယ်။ ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွကို စဉ်းစားတဲ့ အခါမှာ ဘာကိုထည့်မလဲပေါ့။ အိမ်မှာနေမယ့် မိသားစုသည် အန်ကယ်ကြီးရဲ့ သမီး မိသားစု နေမယ်။ ဒါကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြတဲ့ ကိန္နရီကိန္နရာ ရုပ်တုလေးကိုထည့်မယ်။ မြန်မာဆိုတဲ့ ဟန်ကို ပေါ်စေမယ့် ကဒေါင်း ကို ထည့်မယ်ဆိုပြီး အလည်မှာ ကဒေါင်း ကို ထည့်ထားတယ်၊ Bothsideမှာတော့ ကန္နရီကိန္နရာ ကို ထည့်ထားတယ်။
နောက်တစ်ခုကကျတော့ ဘုရားခန်းမှာ အန်ကယ်လ်ကြီးတို့က ကြည်ညိုချင်တယ်၊ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းဖြစ် ချင်တယ်။ ပလ္လင်မှာလည်း ခပ်မြင့်မြင့် ထားချင်တယ်၊ ဆွမ်းတော်ပွဲတွေကပ်ဖို့ နေရာလည်း လိုချင်တယ်။ ဘုရားကို တစ်ဆူတည်း ခပ်ကြီးကြီး ကိုးကွယ်ချင်တယ်။ ဘုရားသည် သပ္ပါယ်ရမယ်၊ ကြည်ညိုဖွယ် ဖြစ်ရမယ်။ ဘုရားကို မြင်ရတာနဲ့ စိတ်က ရှင်းနေရမယ်ဆိုတာလေးလိုချင်တယ်။ ဒါဆို ဘုရားကို ဘာဆင်းတုကိုးကွယ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေး ဖြစ်လာတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကလည်း ဒီဇီုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ဘုရားဆင်းတုတော်ရဲ့ အရောင်တွေ သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ များသောအားဖြင့် အရွယ်အစားပေါ့။ ဘုရားဆင်းတုတော်ရဲ့ ဥာဏ်တော်အမြင့် ဘယ်လောက် ထားသင့်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်း ကျွန်တော်က သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ဒီအိမ်မှာလည်း အန်ကယ်လ်ကြီးတို့နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဘုရားဆင်းတုတော်ကို အဖြူရောင် ကျောက်ဆင်းတုတော်ကို ကိုးကွယ်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်။ များသေညအားဖြင့် အရွယ်အစားပေါ့။ ဘုရားဆင်းတုတော်ရဲ့ ဥာဏ်တော်အမြင့် ဘယ်လောက်ထားသင့်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်း ကျွန်တော်ကသတ်မှတိပေးလေ့ရှိတယ်။ ဒီအိမ်မှာလည်း အန်ကယ်လ်ကြီးတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဘုရားဆင်းတုတော်ကို အဖြူရောင် ကျောက်ဆင်းတုတော်ကို ကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်။ဒီမှာ သူရဲ့ နောက်ခံ၊ နောက်ခံက ဘုရားဆင်းတုတော်ကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ပုံစံ ဖြစ်ရမယ်။ နောက် ပလ္လင် ကလည်း ဘုရားဆင်းတုတော်ကို အထောက်အပံ့ပေးရမယ်။ အဲ့တော့ ဘုရားဆင်းတုတော်သည် အဖြူ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အနောက်ကို အဖြူ ရွေးချယ်လို့ မရဘူး။
သစ်သားဆိုရင်လည်း တစ်အိမ်လုံးမှာ သစ်သား သုံးထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဘုရားဆင်းတုတော်ကို သစ်သား မသုံးစေချင်ဘူး။ material choice ပေါ့။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘုရားရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ဗောဓိညောင်ပင်ထည့်မယ်။ ဒီမှာ ရုပ်ကြွသွားမလား၊ ဆေးရေးပန်းချီသွားမလား စဉ်းစားကြတယ်။ အောက်ဘက်မှာလည်း ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွ ပါပြီးသား ဖြစ်တာကြောင့် ဆေးရေးပန်းချီကို ရွေးချယ်လိုက်တယ်။ ဆေးရေးပန်းချီမှာက မြန်မာ့ ဟန်ပါတဲ့ ဆေးရေး ပန်းချီ ဖြစ်ရမယ်၊ နောက် ဘုရားဆင်းတုက အဖြူကိုလည်း လွှမ်းမိုးလို့မရဘူး ဆိုတဲ့ အခါကတော့ ကျွန်တော်သည် ယွန်းပန်းချီကို ရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်းပန်းချီမှာ အရောင် ၂မျိုး ရှိတယ်။ ရွှေသွားမလား၊ အနီသွားမလားပေါ့။ အနီဆိုရင် သူက တခြားအရောင်လေးတွေက ပြန်ထောက်ပံ့ပေးရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကေ၇ွှကိုပဲေ၇ွးချယ် လိုက်တယ်။ ရွှေဆိုရင် အမဲနဲ့ ရွှေ ၂ မျိုးပဲ သူ့
အရောင်မှာ ပါလာမယ်။ ရွှေ ဆိုသည်လည်း မိသားစုရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာပါတယ်။ ဒါကို ဘုရားခန်းမှာ ပြန်ထည့်ထားလိုက်တာပေါ့။ နောက် ပလ္လင်၊ ပလ္လင် ကလည်း ကျွန်တော် inspire ယူထားတာပါပဲ။ ပုဂံဘုရားတွေမှာ ရှိတဲ့ ပုံစံကို ယူထားတယ်၊ အခက်အလက်တွေကိုတော့ ကုန်းဘောင်ခေတ် အနုလက်ရာလေးတွေနဲ့ ဖြည့်ပြီးတော့ ဒီဇိုင်းကို ပြောင်းပြီး ရေးဆွဲပေးခဲ့တာပေါ့။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်တော်ပြောချင်တာကinterior design ကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ အခါမှာ ဘာတွေက ထပ်ပြီး အားဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီ interior design ကို ပိုပြီး ရုပ်ကြွလာစေဖို့ dressing အပိုင်း။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် interior decoration အပိုင်းပေါ့။
အဲ့ဒါက ကျွန်တော်တို့ interior design ပိုင်းကို အများကြီး အထောက်အပံ့ပေးတယ်။ Dressing အပိုင်းမှာ ကျွန်တော် ခံယူထားတာက interior decoration ဆိုတာက part of interior design ပဲ။ interior design လုပ်ပြီဆိုရင် designer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းမှာ decoration ကလည်း မပါမဖြစ် ပါကိုပါလာရတာ။ dressing အပိုင်းမှာ အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုက artwork ပဲပေါ့။ ပြောရရင်တော့ ပန်းချီတွေ ၊ နံရံကပ် ရုပ်လုံးရုပ်ကြွတွေ ၊ ရုပ်ထုတွေ ဒါတွေကလည်း အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ ဒီအိမ်မှာ ပန်းချီနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြောစရာ ရှိတာလေးက ဒီအိမ်ကို ပန်းချီကားတွေချိတ်မယ် ဆိုတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားတယ်။ အကြောင်းအရာက မန္တလေးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုေ၇ွးချယ်ထားတယ်။ မန္တလေးဆိုတဲ့ အခါကျတော့ အန်ကယ်လ်ကြီးက မန္တလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရှုမျှော်ခင်းကို ဆွဲချင်တာပေါ့။ မန္တလေး ပုံတွေကိုပဲ ချိတ်လိုက်တာက မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ရိုးရှင်းတယ်လို့ ယူဆတယ်။ ပန်းချီကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာမရှိဘူး ဆိုတာမျိုးလေး ယူဆတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒီ ပန်းချီကားနဲံ ပတ်သက်ပြီးတော့ client တွေက သူတို့ ဧည့်သည်တွေကို ပြောစရာလေးတစ်ခု ကျန်ခဲ့စေချင်တယ်။ ပန်းချီဆရာနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့ အခါကျတော့ အကြောင်းအရာကတော့ ဒါပဲ။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကဗျာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပါ။ ဒီပန်းချီကားကို ကြည့်လိုက်ရင် ဒီကဗျာကို သရုပ်ဖော်တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီး တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ဆိုရင် ငယ်ငယ်ကသင်ယူခဲ့တဲ့ အချုပ်တန်းဆရာဖေရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပေါ့။ မန္တလေးဆောင်းရာသီကို ဖွဲ့ထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ချပြပေးတယ်။ ကိုယ့်ဘက်လည်း ရှာပေးတယ်၊ ပန်းချီဆရာကလည်း ကျွန်တော့်ကို အများကြီး ကူပြီးရှာပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်။ ပန်းချီဆရာနဲ့ကလည်း ချိတ်ဆက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အန်ကယ်လ်ကြီး အနေနဲ့က သူမွေးဖွားရာ ဇာတိ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲ့ ဒီမှာ နာမည်ကြီးတာက လှည်းတွေပေါ့။ သူ့ ငယ်ဘ၀ အမှတ်တရ မှာ လှည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ အိပ်ခန်းမှာဆိုရင် လှည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပန်းချီကားတွေ ချိတ်ထားတယ်။ ကျန်တဲ့ dressing ပိုင်းကျတော့ ယွန်းအုပ်လေးတွေ ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလေးတွေ ပြည်တွင်းမှာ ရှာဖွေခဲ့တယ်။ များသောအားဖြင့် Bagan House ကနေ ကျွန်တော်တို့ ၀ယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ တချို့ dressing တွေကျ ဘန်ကောက်ကနေ ၀ယ်ခဲ့တာ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ interior design မှာ ဒီလို dressing လေးတွေကြောင့်လည်း ပိုပြီး ပေါ်လွင်လာတယ်လို့ ယူဆတယ်။ နောက်တစ်ခုကျ ကျွန်တော်တ်ု့ ကော်ဇောပိုင်းပေါ့။ ကော်ဇောကိုလည်း အခန်းတွေရဲ့ theme အလိုက် အရောင်လေးတွေ၊ pattern လေးတွေ ကို အခန်းအလိုက် ခွဲထားတယ်။ ဧည့်ခန်းမှာဆို ခန့်ခန့်ထည်ထည် ကနုတ်အကြီးတွေနဲ့ ထည့်ထားပေးတယ်။ public နေရာ အတော်များများမှာ ထည့်ထားပေးတယ်။ အန်ကယ်လ်ကြီးရဲ့ မြေးမလေးအခန်းဆိုရင် တကယ့်ကို မိန်းမပျိုလေးအခန်းပုံစံမျိုးလေး theme ကို ယူထားတယ်။ ပန်းရောင်လေးနဲ့ အခုန ရွှေရောင်လေးနဲ့ ပြန်ရောပြီး ထည့်ပေးထားတယ်။
Landscape ဒီဇိုင်းရဲ့ ခြံစည်းရိုး ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာ green area ကို များများပါစေချင်တာကြောင့် vertical landscape တွေထည့်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ Fence ကတိုင်ဖုံး ဒီဇိုင်းက ရွှေကျောင်းကိုပဲ inspire လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Landscape မှာ အပင်ရွေးချယ်မှုကို ကိုထွန်းနေအောင်ရဲ့ အကြံဥာဏ်နဲ့ ကူညီမှုအများဆုံးရရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုထွန်းနေအောင် လိုချင်တဲ့ အပင်ကို မရရအောင် ရှာပေးတာကတော့ ညိလေးအောင်သူရပါ။
ကျွန်တော်တို့ ပရော့ဂျက်တစ်ခုလုပ်တဲ့ အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်။ client သည်လည်း client အလျောက်၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီဇိုင်နာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ပြီးတော့အနုပညာရှင်တွေ ပါလာတယ်၊ ပန်းချီဆရာတွေ အကုန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး လုပ်လိုက်တဲ့အခါ အောင်မြင်တဲ့ ပရော့ဂျက် တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ တကယ်တော့ အုပ်စုလိုက်လုပ်ရတဲ့ ပရော့ဂျက်မှာ စုစုစည်းစည်းနဲ့ တိုင်တိုင်ပင်ပင် လုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ နောက်တစ်ခုက client ဘက်ကလည်း သူတို့ လုပ်ချင်တာတွေ ၊ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ တခါတလေ တချို့clientကမပြောတတ်တာ။ သူတို့ လိုချင်တာကို စကားလုံး အနေနဲ့ မပြောတတ်ဘူး။ သူတို့ လိုချင်တဲ့ အရာကို ကျွန်တော်တို့က မှန်းတတ်ရမယ်၊ ပြောလာအောင် ရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီး စကားဆင်ရတာပေါ့။ အဲ့အခါကျမှ သူတို့ ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ သိလာရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုမှာ အနီးစပ်ဆုံး ထပ်မိသွားမယ်။ ဒီအခါကျရင် ပရော့ဂျက်က အောင်မြင်တဲ့ ပရော့ဂျက်ဖြစ်သွားမယ်။ ဒီဇိုင်နာတွေအနေနဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးရေးဆွဲယုံတင်မကဘူး ဒီ ဒီဇိုင်းကို တကယ်လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်လာအောင် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာက အရေးကြီး ပါတယ်။ ဒီလိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရာမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရမယ် ၊ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရာ မှာလည်း ကျွန်တော်တို့မှာ ပညာပြည့်ဝနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြည့်ဝတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘယ်သူမှတော့ ရာနှုန်းပြည့်မပြည့်ဝပါဘူး။ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့ဖြည့်သွားရတာပါ။ စာတွေများများ ဖတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ စုစုစည်းစည်းနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လေးလုပ်ကြရင် အောင်ြမင်တဲ့ပရော့ဂျက်လေးတစ်ခု ဖြစ်သွားမှာပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။
Photo – သီရိမေ
အိမျတဈလုံးတညျဆောကျပွငျဆငျရာမှာ အခနျးကဏ်ဍမြားစှာ ပါဝငျပါတယျ။ အောငျမွငျတဲ့ လုပျငနျးစဉျတဈခုဖွဈဖို့က ဒီကဏ်ဍမှာ ပါဝငျနတေဲ့ သူမြားအားလုံးရဲ့ ရညျမှနျးခကျြပါပဲ။ မိမိ သကျဆိုငျရာအခနျးကဏ်ဍကို ရုပျလုံးဖျော၊ အကောငျထညျဖျောနိုငျဖို့ ကွိုးစားရာမှာ မတူညီတဲ့ စိတျကူးတှေ၊ အမွငျတှကေို ရငျဆိုငျကွရပါတယျ။ ဒါတှအေားလုံးကိုတဈသားတညျး ဖွဈစဖေို့ ညှိနှိုငျးပူးပေါငျး ဆောငျရှကျနိုငျမှသာလြှငျ ရညျမှနျးခကျြကို အရောကျလှမျးနိုငျမှာပါ။ ဒီအကွောငျးအရာနဲ့ ပတျသတျပွီး ဝမြှေနိုငျဖို့အတှကျ အိမျအတှငျးပိုငျးဒီဇိုငျးမြားစှာကို ရေးဆှဲဖနျတီးပေးခဲ့သူ အောငျမွငျသော interior designer တဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနသေူ MOPA Design မှ interior designer ကိုကြျောမိုးဝနေဲ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးဖွဈခဲ့တာကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
MOPA Design မှ interior Designer ကိုကြျောမိုးဝနေဲ့ ပွောဖွဈခဲ့တာလေးတှကျေတော့ – ဒီနေ့ Myanmar Home & Decor နဲ့အငျတာဗြုးလေးမှာ ကြှနျတျော ရှေးခယျြဖွဈတဲ့ ပရောဂကျြလေးကတော့ Residense ပရောဂကျြတဈခုဖွဈတဲ့ မန်တလေးက Eternal Villa သို့မဟုတျ ထာဝရစံအိမျဆိုတဲ့ ပရောဂကျြလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ ဒီပရောဂကျြလေးကို ရှေးခယျြဖွဈခဲ့သလဲ ဆိုတော့ဒီပရောဂကျြလေးမှာပါတဲ့ design development process က စိတျဝငျစားဖို့လညျးကောငျးတယျ၊ ကိုယျ့အတှကျလညျး ဒီပရောဂကျြကနပွေီးတော့ ထပျပွီးလလေ့ာခှငျ့ရတဲ့ ပညာတှေ ရှိခဲ့တယျ ဒါကွောငျ့ ရှေးခယျြဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီဇိုငျးဆှဲဖို့ စပွီးအပျလာတဲ့နရောကနေ စပွီးပွောခငျြပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ ဒီဇိုငျးမဆှဲခငျ ဒီအိမျမှာ နမေယျ့ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ အမေးအဖွလေေးတှေ လုပျဖို့ လိုလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မိသားစုဝငျတှေ နဲ့ သှားရောကျ တှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။ ပထမဆုံးကတော့ မိသားစုဝငျတဈဦးဖွဈတဲ့ အဖေ ပေါ့။ အနျကယျနဲ့တှဆေုံ့တဲ့ အခြိနျမှာ အနျကယျလျက ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲ သူလိုခငျြတာတှကေိုပွောပွပါတယျ။ ကိုယျ့ကို လှတျလှတျလပျလပျ ဒီဇိုငျးဆှဲခှငျ့ပေးတယျ၊ ပွီးတော့ ကိုယျလိုအပျတဲ့ အရာတှေ အားလုံးကိုလညျး ထောကျပံ့ပေးတယျ ဆိုတဲ့အခါကတြော့ ကိုယျ့အတှကျက ဒီပရောဂကျြမှာ လုပျရတာ တျောတျောလေးကို အဆငျပွပေါတယျ။
Client ကွောငျ့တျောတျောလေးကို အဆငျပွခေဲ့ပါတယျ။ ဒီအိမျမှာ ဘယျသူတှေ နမေလဲ မေးတဲ့ အခါတော့ အနျကယျလျက ဒီအိမျက သူ့ဘဝအတှကျ ထူးထူးခွားခွား ဖွဈခငျြတယျ။ ခမျးခမျးနားနား ဖွဈခငျြတယျ၊ ပွီးတော့ ဒီအိမျသညျ တကယျ့ တကယျကတြော့ အနျကယျလျကွီးက သူ့ရဲ့သမီးဖွဈသူအတှကျကို ဆောကျလုပျပေးထားတာ။ ဒါဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောတို့က တကယျနမေယျ့သူဖွဈတဲ့ အနျကယျလျကွီးရဲ့ သမီးနဲ့ပါ တှဖေို့ လိုအပျလိမျ့မယျဆိုပွီး အနျကယျလျကွီးရဲ့ သမီးနဲ့ သှားတှရေ့ပါတယျ။ သှားတှပွေီ့းတော့ သူလိုခငျြတာလေးတှေ မေးမွနျးတယျ၊ ဒီလိုမေးမွနျးပေးဖွဈတဲ့ အတှကျလညျး သမီးဖွဈသူက တျောတျောလေး ကြေးဇူးတငျ ဝမျးသာခဲ့ပါတယျ။ သူလိုခငျြတာလေးတှေ သိလာတဲ့အခါကတော့ ကိုယျ့အတှကျ ဒီဇိုငျးဆှဲတဲ့အခါမှာ ပိုပွီးအဆငျပွသှေားပါတယျ။
client နဲ့ ဆှေးနှေးပွီးတဲ့ အခါမှာ ­ဒီအိမျအတှကျ ဒီဇိုငျးစတိုငျလျကို ရှေးခယျြဖို့ စဉျးစားရပါတယျ။ တညျနရောသညျ မန်တလေးဖွဈတယျ၊ ဒီအိမျပိုငျရှငျရဲ့ အဓိက လုပျကိုငျတဲ့ လုပျငနျးကလညျး ရှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ လုပျငနျး လုပျကိုငျတယျ ဆိုတဲ့ အခါကတြော့ ကြှနျတျောက ဒါကို အဓိကထား စဉျးစားထားတယျ။ အနျကယျလျကွီးတို့ရဲ့ အလုပျအကိုငျနဲ့ ပတျသကျတာ ပါရမယျ။ တညျနရောကို ထငျဟပျစမေယျ့ အရာလေးတဈခု ပါရမယျ။ ဒါ့အပွငျဒီဇိုငျးလေးက ဘယျလို ပုံစံကို သှားထားလဲ ကြှနျတျောတို့ ပွနျကွညျ့ရပါတယျ။ ကွညျ့ပွီးတော့ ဒါတှေ အားလုံးပေါငျးပွီတော့မှ Design Style တဈခုကို ကြှနျတျောတို့ ထုတျလိုကျပါတယျ။ အနျကယျလျကွီး က အဓိက ကြှနျးသဈကိုပဲ သုံးခငျြတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အနျကယျလျက ကြှနျးသဈကို သုံးခငျြတယျ ဆိုပမေယျ့လညျး ခတျေမီတယျ။ ကြှနျးသဈကို သုံးနကြေ ပုံစံမြိုးကို သူ မသုံးခငျြဘူး။ ခနျ့ခနျ့ထညျထညျလညျး ဖွဈခငျြတယျ၊ သူမြားနဲ့လညျး မတူခငျြဘူး ဘယျလို ပွောငျးသုံးလို့ရမလဲ အဲ့လိုလေး ရှိတဲ့အခါကတြော့ ကြှနျတျောတို့ စဉျးစားရတယျ။ ပွငျသဈက ဗာဆိုငျးနနျးတျော ကို inspire ယူဖို့ စဉျးစားမိတယျ။ ပွငျသဈက ဗာဆိုငျးနနျးတျောကတော့သဈကို မသုံးထားဘူး။ Classic ပုံစံကို သုံးထားတယျ။ သူ့မှာ wall panel တှေ ရှိတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဘကျကို ပွနျကူးတဲ့ အခြိနျကတြော့ ဒီ wall panel အခံတှကေို ပွနျယူထားတယျ။ ပွနျယူထားတယျ ဆိုပမေယျ့ သူကတော့ အခကျအလကျ ကနုတျတှေ အမြားကွီးပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ ဒီဘကျကို ပွနျကူးတဲ့ အခြိနျမှာ အဲ့ဒီလောကျထိ ကနုတျတှေ မထညျ့ခငျြဘူး။ Neo classic ပုံစံမြိုးလေး သှားခငျြတဲ့ အခါကတြော့ ခုန ပွောတဲ့ ကနုတျတှေ အခကျအလကျတှကေို လြော့ခပြဈလိုကျတယျ။ ဗာဆိုငျးနနျးတျောက panel ရဲ့ ဟနျကို ယူလိုကျတယျ။ မွနျမာမှုဖွဈတဲ့ ရှကြေောငျးတို့၊ မန်တလေးနနျးတျောတို့ နောကျပွီး မန်တလေးမှာ ရှိတဲ့ ရှေးဟောငျး အဆောကျအဦတှေ လလေ့ာဖွဈတယျ။ အဲ့ဒီကနမှေ တခြို့ element လေးတှကေို inspire ယူပွီးတော့မှ ဒီအိမျမှာ ပွနျထညျ့ပေးထားတယျ။
ခွံဝနျး Landscape ဒီဇိုငျး၊ ခွံစညျးရိုးနဲ့ ရကေူးကနျ ဒီဇိုငျးတှကေလညျး exterior ဒီဇိုငျးနဲ့ ဟနျခကျြညီအောငျရယျ၊ client ရဲ့ လိုအပျခကျြပျေါမူတညျပွီး ဒီဇိုငျးထုတျပေးဖွဈပါတယျ။ ဒီကွားထဲမှာလိုအပျတဲ့ design documentation တှေ ပွငျဆငျတဲ့ အဆငျ့တှတေော့ ရှိတာပေါ့။ ကြှနျတျောတို့ အတှငျးဒီဇိုငျးမှာ အရေးကွီးတာတဈခုက ဘာပါလာလဲဆိုတော့ finishing ပိုငျးတှကေ အရေးကွီးတယျ။ ပွီးတော့ furniture ၊ furnishing ၊ fixture ပိုငျးတှေ အဲ့ဒါတှကေ အရေးကွီးတဲ့ အပိုငျးမှာပါတယျ။ အိမျတဈခုကို တညျဆောကျပွီဆိုတဲ့နရောမှာ space planning ကလညျးအရေးကွီးတယျ။ ဒီအိမျကို space planning လုပျတဲ့နရောမှာ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပွီးသားဖွဈလို့ သူတို့လိုခငျြတဲ့ space ကိုထုတျနိုငျခဲ့တယျ
နောကျ ဒုတိယ အခကျြ fixture and furnishing အပိုငျးပေါ့။ ဒီအပိုငျးမှာ အနျကယျလျကွီးကို ကြှနျတျောပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးမေးရတယျ။ အနျကယျလျကွီး ဒီအပိုငျးမှာ ဘတျဂကျြဘယျလောကျထားမလဲပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့က သုံးမယျ့ ဘကျဂကျြပျေါမူတညျပွီး ရှေးခယျြရတယျ။ တခါတလေ ကရြငျ client တှကေ interior design လုပျရငျ ဘကျဂကျြရှိမှဆိုတဲ့ အတှေးလေးတဈခုတော့ ရှိတယျ။ အဲ့ဒါက မဟုတျပါဘူး။ အတိုငျးအတာတဈခုလောကျပဲ ရှိရမယျ။ သုံးမယျ့ ဘတျဂကျြပျေါမှာ မူတညျပွီး furniture ရှေးခယျြရမယျ၊ furniture မှာ သုံးမယျ့ material တှေ ရှေးခယျြရမယျ။ ဒီတော့ သူရဲ့ ထိုကျသငျ့တဲ့ ဘတျဂကျြပျေါမူတညျပွီး လိုကျဖကျတဲ့ ဒီဇိုငျးတော့ ရှိကိုရှိတယျ။ ဒီဇိုငျးထှကျကို ထှကျတယျ။
အနျကယျလျကွီးက သူက ထူးခွားခငျြတယျ ဆိုတဲ့ အခါကတြော့ အနျကယျလျကွီးကို မေးရတယျ။ ဘတျဂကျြ ဘယျလောကျသုံးမှာလဲပေါ့။ သူက လဈမဈတော့ ထားထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ သုံးသငျ့တဲ့ ဟာကရြငျတော့ သုံးမယျ။ ဒီတော့ ကြှနျတော့ သဘောပေါကျပွီဆိုတော့ furnitrue အပိုငျးတှကေို ကြှနျတျောတျောတို့ ဘနျကောကျမှာ သှားဝယျတယျ။
ဒီနရောမှာ ကြှနျတျောတို့ ဒီဇိုငျနာတှကေ brand တှကေို သိထားရတယျ။ brand တှကေို high quality ရှိတဲ့ brand တှေ၊ middle rate ရှိတဲ့ brand တှေ၊ low rate ရှိတဲ့ brand တှေ အကုနျလုံးကို သိထားရတယျ။ သိထားတော့မှ ကိုယျ့ပရောဂကျြပျေါမှာ မူတညျပွီးတော့လိုကျဖကျတဲ့ brand ကို ပွနျပွီးတော့ ခပြေးရတာပေါ့။ အဲကတော့မှပဲ ပရောဂကျြမှာ client သုံးခငျြတဲ့ အနအေထားပျေါမူတညျပွီးတော့ design လေးကလညျး သူ့ဟာနဲ့သူ ထှကျလာလိမျ့မယျ။ ဘနျကောကျမှာ ကြှနျတျောတို့ သှားရှေးခယျြတဲ့ အခါကတော့ အနျကယျလျကွီးကို အရငျဆုံး high rate brand ကို ပွလိုကျတယျ။ တကယျတကယျ့တော့ ဈေးကတအားကွီးတယျ ၊ အနျကယျလျကွီးတို့လညျး သိတယျ။ ဒါပမေယျ့ look နဲ့ ပွနျယှဉျတယျ ၊ middle rate ရဲ့ look နဲ့ ယှဉျတယျ၊ low rate ရဲ့ look နဲ့ ယှဉျတယျ ဒီအခြိနျမှာ look က ပွောစရာမလိုအောငျ သိသိသာသာ ကှာသှားတယျ။ ကှာတယျဆိုတဲ့ အခါကတော့ အနျကယျလျကွီး တို့ကတော့ high rate ကို သုံးမယျ။ ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ ရှေးခယျြ ဖွဈတာက Christopher Guy ။ Christopher Guy ဆိုတာက furniture designer ပါ။ သူ့ကိုယျပိုငျ brand ကို တညျဆောကျပွီး ထုတျထားတဲ့ brand ။ ဒီတော့ ဒီအိမျက furniture တှေ အတျောမြားမြားသညျ Christopher Guy ရဲ့ furniture တှမြေားတယျ။
ဒီပရော့ဂကျြမှာကြှနျတျောရရှိခဲ့တဲ့အသိပညာက ဒီဇိုငျနာ တဈယောကျအတှကျ အဓိက ခကျခဲတဲ့အပိုငျးက ကိုယျဆှဲလိုကျတဲ့ ဒီဇိုငျးကို အပွငျမှာ ရုပျလုံးပျေါဖို့ကွိုးစားရတာက အခကျအခဲဆုံး အလုပျပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ကွားထဲမှာ တညျဆောကျနစေဉျကာလမှာ client သညျ စိတျပွောငျးလဲတာ ရှိရငျရှိမယျ၊ သူလိုခငျြတာ ထပျဖွညျ့တာ ရှိကောငျးရှိမယျ။
ကိုယျဆှဲလိုကျတဲ့ ဒီဇိုငျးကို ဘယျလို တညျဆောကျမလဲဆိုတာကို အငျဂငျြနီယာတှနေဲ့ ပွနျလညျ ညှိနှိုငျး ဆှေးနှေးရတာတှေ ရှိတယျ။ ဆှေးနှေးတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ဒီဇိုငျး မပကျြအောငျ ကိုယျကဘယျလို ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးမလဲ ။ အငျဂငျြနီယာတှကေလညျး ကြှနျတျောတို့ကို supportingအမြားကွီးပေးပါတယျ။ ဒီပရော့ဂကျြမှာ အငျဂငျြနီယာက ကိုထှနျးသကျဦးပေါ့။ အဓိက interior အတှကျ ကိုထှနျးသကျဦးကတာဝနျယူပေးတယျ။
နောကျထပျ ထူးခွားတာလေး တဈခုက တဈရကျမှာ အနျကယျလျကွီးဆီက ဖုနျးလာတယျ။ အနျကယျလျကွီးရဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျကနေ ဖုနျးရှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အကွံဉာဏျလေးပေးသှားတယျပေါ့။ ကိုယျ အတှငျးဒီဇိုငျးဝငျတဲ့ အခြိနျမှာ structure က တညျဆောကျပွီးသှားပွီ။ ဒီခြိနျမှာ အနျကယျလျကွီး ဆီက ဖုနျးလာတယျ။ သားရေ … ဒီလှကေားနဲ့ အိမျဝငျပေါကျနဲ့က တညျ့ဖွဈနတေယျ။ အဲ့ဒါသညျ မကောငျးဘူးပေါ့။ ဒါကို ဘယျလိုမြိုး ပွနျပွီး ပွောငျးလို့ရမလဲ … ပေါ့ ကြှနျတေျာ့ကို ပွောလာတယျ။ ကြှနျတျော ပွနျကွညျ့တော့ ဟုတျတယျ၊ တညျ့ဖွဈနတေယျ။ ဘာကွောငျ့ဆိုတော့ အရငျအခနျးဖှဲ့ကို ကြှနျတျောက ပွနျပွငျလိုကျတယျ. ဒါပမေယျ့ ဒီမိနျးဝငျပေါကျနဲ့ လှကေားကိုကြ structure က ပွီးသှားပွီဆိုတော့ ပွနျပွငျလို့ မရလိုကျဘူး။ ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ ဒါကို ပွနျပွငျမယျဆိုရငျ ဖွိုရဖကျြရတာတှလေညျး တအားမြားတော့မယျ၊ အခြိနျကာလ အနနေဲ့လညျး သတျမှတျထားတာထပျတဲ့ ပိုကြျောတော့မယျဆိုတဲ့အခါ ကြှနျတျောစဉျးစားတယျ။ ကိစ်စ တဈခုမှာ အဖွတေဈခုကတော့ရှိမယျ။
ဒီတော့ ကြှနျတျော ဖုနျးရှနေဲ့ ပတျသကျတာတှေ website မှာ ရှာတယျ၊ စာအုပျတှဖေတျတယျ။ ဒီမှာသှားတှတေ့ယျ။ မှနျတယျ လှကေားနဲ့ ဝငျပေါကျနဲ့ တညျ့ဖွဈလို့မရဘူး။ တညျ့ဖွဈရငျ အပွငျဘကျက ကောငျးခွငျး ဆိုးခွငျးတှကေ အိမျထဲကို ဝငျလာနိုငျတယျ၊ အိမျထဲက ကောငျး ခွငျးတှေ ကလညျး အပွငျဘကျကို ထှကျသှားနိုငျတယျ။ ဒီဟာကို ဘယျလို ဖွရှေငျးလို့ ရလဲဆိုတာလညျးတခါတညျး ရေးပေးထားတယျ။ ကြှနျတျော ကံကောငျးတာ တဈခုက လှကေား နဲ့ မိနျးဝငျပေါကျကွားမှာ အခနျး ၂ခု ရှိတယျ။
လှကေား ဆငျးဆငျးခငျြးမှာ foyer လေး ကြှနျတျော လုပျပေးထားတယျ၊ အဲ့ ဒါ ပွီးမှ ထမငျးစားခနျး ဖွဈသှားတယျ။ ဒါက ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အနျကယျလျကွီးက အရငျ စစခငျြးအိမျကို exterior ဆှဲတဲ့ အခြိနျမှာ သူရဲ့ ဝငျပေါကျ က တခွား တဈဘကျမှာ ရှိတာ။ ထမငျးစားခနျးဘကျက မိနျးဝငျပေါကျမဟုတျဘူး။ outdoor dinning လေး လုပျမယျဆို ထှကျလို့ ရအောငျသူက ဝငျပေါကျလေးတဈခု လုပျပေးထားတာ။ ဒါပမေယျ့ နောကျပိုငျး ပလနျက ပွောငျးသှားတဲ့ အခါမှာ ဘေးဘကျက အကှကျကို landscape လုပျလိုကျတဲ့ အခါကတြော့ ဝငျပေါကျက နှဈခု ဖွဈသှားတာပေါ့။ မိနျးဝငျပေါကျက တဈခုရှိတယျ၊ တခါ ထမငျးစားခနျး ဘကျက မိနျးဝငျပေါကျကတဈခုဖွဈသှားတယျ။ ကြှနျတျောက အခနျးဖှဲ့လုပျတော့ လှကေားက ဆငျးရငျ foyer ရှိတယျ၊ ပွီးမှ ထမငျးစားခနျး ရှိမယျ။ ပွီးမှ မိနျးဝငျပေါကျက လာတယျ ဆိုတဲ့ အခါကတော့ ဒါလေးက အားသာခကျြတဈခုဖွဈသှားတယျ။ ဖုနျးရှေ အရ လှကေားနဲ့ မိနျးဝငျပေါကျ က ဆယျပေ အကှာမှာ ရှိရငျဆိုတဲ့ အခကျြလေးတဈခုပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့မှာက ဆယျပေ မကဘူး။ ပေ သုံးဆယျ ဝနျးကငျြလောကျကို ကယျြနတေယျ။ ဒါလေးက အားသာခကျြတဈခု၊ နောကျတဈခုက ကြှနျတျောက လှကေားဆငျးဆငျးခငျြး foyer ဧရီယာမှာ ခရဈစတယျ မီးဆိုငျးကွီးတဈခုကို ထားမယျ။ ဖုနျးရှရေဲ့ နောကျထပျအဖွတေဈခုကလညျး တကယျလို့ ဒီပွသနာကို ဖွရှေငျးဖို့ မလှယျတော့ဘူး ဖွိုဖို့ဖကျြဖို့လညျး မလှယျတော့ဘူးဆိုရငျ အလညျမှာ မီးဆိုငျးတဈခု ထညျ့လိုကျပါဆိုတဲ့ ဖွရှေငျးခကျြလေးပါလာတယျ။ မီးဆိုငျးက reflection ပါတာကိုး။ ကောငျးခွငျးဆိုးခွငျးတှကေ ဘကျပွနျသှားမယျပေါ့။ ကြှနျတျောကလညျး နဂိုတညျးက ဒီနရောမှာ မီးဆိုငျးထညျ့မှာဆိုတော့ ကြှနျတေျာ့အတှကျလညျး အဆငျပွသှေားတယျ။ ဒါကို ကြှနျတျောက အနျကယျလျကွီးကို ရှငျးပွတယျ။ အနျကယျလျကွီးရဲ့ ကောငျးတဲ့ အခကျြတဈခုက သငျ့တျောခိုငျလုံတဲ့ အကွောငျးပွခကျြသာပေး သူလကျခံတယျ။ သူက အတငျးကွီးလိုကျမပွငျဘူး။ သူပွငျခငျြတယျဆို ကြှနျတျောနဲ့ တိုငျပငျတယျ။ ဒါကို ပွငျရငျကောငျးမလား ပိုကောငျးသှား မလား တိုငျပငျတယျ။ အကွံဉာဏျယူတယျ။ အဲ့အခါ ကြှနျတျောကလညျး သခြောပွောပွရတယျ။ မပွငျခငျြဘူးဆိုရငျ သငျ့တျောခိုငျလုံတဲ့အဖွကေို ရှငျးပွရတယျ။ ကြှနျတျောတို့က မရဘူး မပွငျဘူးဆိုတာမြိုးသှားပွောလို့မရဘူး။ ဒါဆိုရငျ ဘယျလို client မြိုးမဆို စိတျကနြေပျမှု ရမှာ မဟုတျဘူး။ သူလုပျခငျြတာကို လုပျမှာပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ ဒီဇိုငျနာဘကျကနပွေီး ခိုငျလုံတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ ပေးရတယျ၊ရှငျးပွပေးရတယျ။ client တှကေလညျး ဒါကို စဉျးစားတယျ။ လကျခံသငျ့တယျ ထငျရငျ လကျခံတယျပေါ့။ ဒီလို မြိုး ညှိနှိုငျးပွီး သှားကွရပါတယျ။
နောကျတဈခု ပွောတာလေးရှိတာက Design concept အရ ကြှနျတျော ဗာဆိုငျးနနျးတျောက wall panel နဲ့ မွနျမာရဲ့ ဗိသုကာအဆောကျအဦးမှာ ရှိတဲ့ wall panel နဲ့ ပွနျပွီးတော့ ရောစပျထားတယျ။ နောကျထပျ ရုပျလုံး ရုပျကွှလေးတှကေိုလညျး ကြှနျတျောသုံးထားတယျ။ အနျကယျလျကွီးရဲ့ focus က ဘာလဲဆိုတဲ့ အခါကတော့ သူက မိနျးဝငျပေါကျက ဝငျလိုကျတဲ့ အခါနံရံကွီးတဈခု ရှိတယျ။ ဒီ နံရံ ကွီးသညျ မိနျးဝငျပေါကျဖွဈတာကွောငျ့ ဝငျလိုကျတာနဲ့ကို ထူးခွားနရေမယျ။ ဆိုတော့ ဒီ နံရံ ကို ဘာလုပျမလဲ ကြှနျတျောတို့ စဉျးးစားရတာပေါ့။ အိမျဆိုတဲ့ သဘောတရားမှာ ခဈြခွငျးမတ်ေတာ ပါတယျ။ အနျကယျလျကွီးကလညျး မွနျမာ ၊ မွနျမာဖွဈရတာလညျး ဂုဏျယူတယျ ဆိုတဲ့ အခါကတြော့ ဒီနရောမှာ ပုံတဈခုထညျ့မယျပေါ့။ နံရံဆေးရေးပနျးခြီသှားမလား၊ ရုပျလုံး ရုပျကွှ သှားမလား ကြှနျတျော စဉျးစားတာပေါ့။ ကြှနျတျောက မန်တလေးမှာ လလေ့ာတဲ့ အခါ ဆေးရေးပနျးခြီတှေ တှတေ့ယျ၊ ရုပျလုံး ရုပျကွှတှလေညျး တှတေ့ယျ။ အဲ့ဒီထဲမှာ ဘာကို သဘော အကဆြုံးလဲဆိုဆော့ ရှကြေောငျး ။ ရှကြေောငျးရဲ့ ဗိသုကာဟနျတှေ ၊ အတှငျးမှာ လုပျထားတဲ့ အပွငျအဆငျတှေ သဘောကတြယျ။ တံခါးမှာ ထညျ့ထားတဲ့ ရုပျလုံး ရုပျကွှလေးတှေ အရမျးသဘောကတြယျ။ အဲ့ဒီ အတှကျကွောငျ့ ကြှနျတျောက ရုပျလုံး ရုပျကွှ ထညျ့လိုကျတယျ။ ပွောရရငျတော့ ဒီအိမျက ရှကြေောငျးကို အမြားကွီး inspire ယူထားတယျ။ ရုပျလုံး ရုပျကွှကို စဉျးစားတဲ့ အခါမှာ ဘာကိုထညျ့မလဲပေါ့။ အိမျမှာနမေယျ့ မိသားစုသညျ အနျကယျကွီးရဲ့ သမီး မိသားစု နမေယျ။ ဒါကွောငျ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကိုပွတဲ့ ကိန်နရီကိန်နရာ ရုပျတုလေးကိုထညျ့မယျ။ မွနျမာဆိုတဲ့ ဟနျကို ပျေါစမေယျ့ ကဒေါငျး ကို ထညျ့မယျဆိုပွီး အလညျမှာ ကဒေါငျး ကို ထညျ့ထားတယျ၊ Bothsideမှာတော့ ကန်နရီကိန်နရာ ကို ထညျ့ထားတယျ။
နောကျတဈခုကကတြော့ ဘုရားခနျးမှာ အနျကယျလျကွီးတို့က ကွညျညိုခငျြတယျ၊ ကယျြကယျြဝနျးဝနျးဖွဈ ခငျြတယျ။ ပလ်လငျမှာလညျး ခပျမွငျ့မွငျ့ ထားခငျြတယျ၊ ဆှမျးတျောပှဲတှကေပျဖို့ နရောလညျး လိုခငျြတယျ။ ဘုရားကို တဈဆူတညျး ခပျကွီးကွီး ကိုးကှယျခငျြတယျ။ ဘုရားသညျ သပ်ပါယျရမယျ၊ ကွညျညိုဖှယျ ဖွဈရမယျ။ ဘုရားကို မွငျရတာနဲ့ စိတျက ရှငျးနရေမယျဆိုတာလေးလိုခငျြတယျ။ ဒါဆို ဘုရားကို ဘာဆငျးတုကိုးကှယျမလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးလေး ဖွဈလာတာပေါ့။ ကြှနျတျောကလညျး ဒီဇီုငျးနဲ့ လိုကျဖကျအောငျ ဘုရားဆငျးတုတျောရဲ့ အရောငျတှေ သတျမှတျပေးလရှေိ့တယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ အရှယျအစားပေါ့။ ဘုရားဆငျးတုတျောရဲ့ ဉာဏျတျောအမွငျ့ ဘယျလောကျ ထားသငျ့တယျဆိုတာလေးကိုလညျး ကြှနျတျောက သတျမှတျပေးလရှေိ့တယျ။ ဒီအိမျမှာလညျး အနျကယျလျကွီးတို့နဲ့ တိုငျပငျပွီး ဘုရားဆငျးတုတျောကို အဖွူရောငျ ကြောကျဆငျးတုတျောကို ကိုးကှယျဖို့ ရှေးခယျြလိုကျကွတယျ။ မြားသညေအားဖွငျ့ အရှယျအစားပေါ့။ ဘုရားဆငျးတုတျောရဲ့ ဉာဏျတျောအမွငျ့ ဘယျလောကျထားသငျ့တယျဆိုတာလေးကိုလညျး ကြှနျတျောကသတျမှတိပေးလရှေိ့တယျ။ ဒီအိမျမှာလညျး အနျကယျလျကွီးတို့နဲ့တိုငျပငျပွီး ဘုရားဆငျးတုတျောကို အဖွူရောငျ ကြောကျဆငျးတုတျောကို ကိုးကှယျဖို့ရှေးခယျြလိုကျကွတယျ။ဒီမှာ သူရဲ့ နောကျခံ၊ နောကျခံက ဘုရားဆငျးတုတျောကို အထောကျအပံ့ပေးတဲ့ပုံစံ ဖွဈရမယျ။ နောကျ ပလ်လငျ ကလညျး ဘုရားဆငျးတုတျောကို အထောကျအပံ့ပေးရမယျ။ အဲ့တော့ ဘုရားဆငျးတုတျောသညျ အဖွူ ဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့ အနောကျကို အဖွူ ရှေးခယျြလို့ မရဘူး။
သဈသားဆိုရငျလညျး တဈအိမျလုံးမှာ သဈသား သုံးထားတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ဘုရားဆငျးတုတျောကို သဈသား မသုံးစခေငျြဘူး။ material choice ပေါ့။ ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ ဘုရားရဲ့ အနောကျဘကျမှာ ဗောဓိညောငျပငျထညျ့မယျ။ ဒီမှာ ရုပျကွှသှားမလား၊ ဆေးရေးပနျးခြီသှားမလား စဉျးစားကွတယျ။ အောကျဘကျမှာလညျး ရုပျလုံး ရုပျကွှ ပါပွီးသား ဖွဈတာကွောငျ့ ဆေးရေးပနျးခြီကို ရှေးခယျြလိုကျတယျ။ ဆေးရေးပနျးခြီမှာက မွနျမာ့ ဟနျပါတဲ့ ဆေးရေး ပနျးခြီ ဖွဈရမယျ၊ နောကျ ဘုရားဆငျးတုက အဖွူကိုလညျး လှမျးမိုးလို့မရဘူး ဆိုတဲ့ အခါကတော့ ကြှနျတျောသညျ ယှနျးပနျးခြီကို ရှေးခယျြဖွဈပါတယျ။ ယှနျးပနျးခြီမှာ အရောငျ ၂မြိုး ရှိတယျ။ ရှသှေားမလား၊ အနီသှားမလားပေါ့။ အနီဆိုရငျ သူက တခွားအရောငျလေးတှကေ ပွနျထောကျပံ့ပေးရတယျဆိုတော့ ကြှနျတျောက ရှကေိုပဲ ရှေးခယျြ လိုကျတယျ။ ရှဆေိုရငျ အမဲနဲ့ ရှေ ၂ မြိုးပဲ သူ့
အရောငျမှာ ပါလာမယျ။ ရှေ ဆိုသညျလညျး မိသားစုရဲ့ စီးပှားရေး လုပျငနျးမှာပါတယျ။ ဒါကို ဘုရားခနျးမှာ ပွနျထညျ့ထားလိုကျတာပေါ့။ နောကျ ပလ်လငျ၊ ပလ်လငျ ကလညျး ကြှနျတျော inspire ယူထားတာပါပဲ။ ပုဂံဘုရားတှမှော ရှိတဲ့ ပုံစံကို ယူထားတယျ၊ အခကျအလကျတှကေိုတော့ ကုနျးဘောငျခတျေ အနုလကျရာလေးတှနေဲ့ ဖွညျ့ပွီးတော့ ဒီဇိုငျးကို ပွောငျးပွီး ရေးဆှဲပေးခဲ့တာပေါ့။ နောကျတဈခကျြက ကြှနျတျောပွောခငျြတာကinterior design ကိုဖနျတီးလိုကျတဲ့ အခါမှာ ဘာတှကေ ထပျပွီး အားဖွညျ့ရမယျဆိုတဲ့အခါကတြော့ ဒီ interior design ကို ပိုပွီး ရုပျကွှလာစဖေို့ dressing အပိုငျး။ အကွမျးဖငျြးအားဖွငျ့ interior decoration အပိုငျးပေါ့။
အဲ့ဒါက ကြှနျတျောတို့ interior design ပိုငျးကို အမြားကွီး အထောကျအပံ့ပေးတယျ။ Dressing အပိုငျးမှာ ကြှနျတျော ခံယူထားတာက interior decoration ဆိုတာက part of interior design ပဲ။ interior design လုပျပွီဆိုရငျ designer တဈယောကျအနနေဲ့ ဖနျတီးလိုကျတဲ့ ဒီဇိုငျးမှာ decoration ကလညျး မပါမဖွဈ ပါကိုပါလာရတာ။ dressing အပိုငျးမှာ အရေးကွီးဆုံးတဈခုက artwork ပဲပေါ့။ ပွောရရငျတော့ ပနျးခြီတှေ ၊ နံရံကပျ ရုပျလုံးရုပျကွှတှေ ၊ ရုပျထုတှေ ဒါတှကေလညျး အရမျး အရေးကွီးတယျ။ ဒီအိမျမှာ ပနျးခြီနဲ့ ပတျသကျရငျ ပွောစရာ ရှိတာလေးက ဒီအိမျကို ပနျးခြီကားတှခြေိတျမယျ ဆိုတော့ အကွောငျးအရာတဈခုကို ရှေးခယျြထားတယျ။ အကွောငျးအရာက မန်တလေးအကွောငျးအရာတဈခုကို ရှေးခယျြထားတယျ။ မန်တလေးဆိုတဲ့အခါကတြော့ အနျကယျလျကွီးက မန်တလေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ရှုမြှျောခငျးကို ဆှဲခငျြတာပေါ့။ မန်တလေး ပုံတှကေိုပဲ ခြိတျလိုကျတာက မှနျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ ရိုးရှငျးတယျလို့ ယူဆတယျ။ ပနျးခြီကားနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောစရာမရှိဘူး ဆိုတာမြိုးလေး ယူဆတယျ။ ကြှနျတျောအနနေဲ့ ဒီ ပနျးခြီကားနဲံ ပတျသကျပွီးတော့ client တှကေ သူတို့ ဧညျ့သညျတှကေို ပွောစရာလေးတဈခု ကနျြခဲ့စခေငျြတယျ။ ပနျးခြီဆရာနဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးတဲ့ အခါကတြော့ အကွောငျးအရာကတော့ ဒါပဲ။ ဒါပမေယျ့ မန်တလေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ကဗြာနဲ့ ခြိတျဆကျပေးပါ။ ဒီပနျးခြီကားကို ကွညျ့လိုကျရငျ ဒီကဗြာကို သရုပျဖျောတဲ့ ပုံစံမြိုး ဖွဈရမယျ ဆိုပွီး တိုငျပငျ ဆှေးနှေးခဲ့တယျ။ မှတျမှတျရရ ဆိုရငျ ငယျငယျကသငျယူခဲ့တဲ့ အခြုပျတနျးဆရာဖရေဲ့ ကဗြာတဈပုဒျပေါ့။ မန်တလေးဆောငျးရာသီကို ဖှဲ့ထားတဲ့ ကဗြာတဈပုဒျကို ခပြွပေးတယျ။ ကိုယျ့ဘကျလညျး ရှာပေးတယျ၊ ပနျးခြီဆရာကလညျး ကြှနျတေျာ့ကို အမြားကွီး ကူပွီးရှာပေးခဲ့တာတှရှေိတယျ။ ပနျးခြီဆရာနဲ့ကလညျး ခြိတျဆကျတိုငျပငျဆှေးနှေးပွီး ဖနျတီးခဲ့ကွပါတယျ။ နောကျတဈခုက အနျကယျလျကွီး အနနေဲ့က သူမှေးဖှားရာ ဇာတိ နဲ့ ပတျသကျပွီး အဲ့ ဒီမှာ နာမညျကွီးတာက လှညျးတှပေေါ့။ သူ့ ငယျဘ၀ အမှတျတရ မှာ လှညျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လညျး ရှိခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ အနျကယျလျကွီးရဲ့ အိပျခနျးမှာဆိုရငျ လှညျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ပနျးခြီကားတှေ ခြိတျထားတယျ။ ကနျြတဲ့ dressing ပိုငျးကတြော့ ယှနျးအုပျလေးတှေ ၊ အသုံးအဆောငျ ပစ်စညျးလေးတှေ ပွညျတှငျးမှာ ရှာဖှခေဲ့တယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ Bagan House ကနေ ကြှနျတျောတို့ ဝယျခဲ့ပါတယျ။ ကနျြတဲ့ တခြို့ dressing တှကြေ ဘနျကောကျကနေ ဝယျခဲ့တာ ရှိတယျ။ ကြှနျတျောတို့ interior design မှာ ဒီလို dressing လေးတှကွေောငျ့လညျး ပိုပွီး ပျေါလှငျလာတယျလို့ ယူဆတယျ။ နောကျတဈခုကြ ကြှနျတျောတျု့ ကျောဇောပိုငျးပေါ့။ ကျောဇောကိုလညျး အခနျးတှရေဲ့ theme အလိုကျ အရောငျလေးတှေ၊ pattern လေးတှေ ကို အခနျးအလိုကျ ခှဲထားတယျ။ ဧညျ့ခနျးမှာဆို ခနျ့ခနျ့ထညျထညျ ကနုတျအကွီးတှနေဲ့ ထညျ့ထားပေးတယျ။ public နရော အတျောမြားမြားမှာ ထညျ့ထားပေးတယျ။ အနျကယျလျကွီးရဲ့ မွေးမလေးအခနျးဆိုရငျ တကယျ့ကို မိနျးမပြိုလေးအခနျးပုံစံမြိုးလေး theme ကို ယူထားတယျ။ ပနျးရောငျလေးနဲ့ အခုန ရှရေောငျလေးနဲ့ ပွနျရောပွီး ထညျ့ပေးထားတယျ။
Landscape ဒီဇိုငျးရဲ့ ခွံစညျးရိုး ဒီဇိုငျးတှဖေနျတီးတဲ့အခါမှာ green area ကို မြားမြားပါစခေငျြတာကွောငျ့ vertical landscape တှထေညျ့ပေးဖွဈပါတယျ။ Fence ကတိုငျဖုံး ဒီဇိုငျးက ရှကြေောငျးကိုပဲ inspire လုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ Landscape မှာ အပငျရှေးခယျြမှုကို ကိုထှနျးနအေောငျရဲ့ အကွံဉာဏျနဲ့ ကူညီမှုအမြားဆုံးရရှိခဲ့တယျ။ ကြှနျတျောနဲ့ ကိုထှနျးနအေောငျ လိုခငျြတဲ့ အပငျကို မရရအောငျ ရှာပေးတာကတော့ ညိလေးအောငျသူရပါ။
ကြှနျတျောတို့ ပရော့ဂကျြတဈခုလုပျတဲ့ အခါ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ တိုငျပငျဆှေးနှေးရမယျ။ client သညျလညျး client အလြောကျ၊ ကြှနျတျောတို့ ဒီဇိုငျနာ၊ အငျဂငျြနီယာ၊ ပွီးတော့အနုပညာရှငျတှေ ပါလာတယျ၊ ပနျးခြီဆရာတှေ အကုနျ တိုငျပငျဆှေးနှေးပွီး လုပျလိုကျတဲ့အခါ အောငျမွငျတဲ့ ပရော့ဂကျြ တဈခုဖွဈလာတယျ။ တကယျတော့ အုပျစုလိုကျလုပျရတဲ့ ပရော့ဂကျြမှာ စုစုစညျးစညျးနဲ့ တိုငျတိုငျပငျပငျ လုပျဖို့ အရေးကွီးတယျ။ နောကျတဈခုက client ဘကျကလညျး သူတို့ လုပျခငျြတာတှေ ၊ ဖွဈခငျြတာတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောဖို့လညျးလိုအပျပါတယျ။ တခါတလေ တခြို့clientကမပွောတတျတာ။ သူတို့ လိုခငျြတာကို စကားလုံး အနနေဲ့ မပွောတတျဘူး။ သူတို့ လိုခငျြတဲ့ အရာကို ကြှနျတျောတို့က မှနျးတတျရမယျ၊ ပွောလာအောငျ ရှကေ့နဦေးဆောငျပွီး စကားဆငျရတာပေါ့။ အဲ့အခါကမြှ သူတို့ ဘာလိုခငျြတယျဆိုတာ သိလာရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ဖနျတီးမှုမှာ အနီးစပျဆုံး ထပျမိသှားမယျ။ ဒီအခါကရြငျ ပရော့ဂကျြက အောငျမွငျတဲ့ ပရော့ဂကျြဖွဈသှားမယျ။ ဒီဇိုငျနာတှအေနနေဲ့ ဒီဇိုငျးတဈခုကို ဖနျတီးရေးဆှဲယုံတငျမကဘူး ဒီ ဒီဇိုငျးကို တကယျလကျတှအေ့ကောငျအထညျပျေါလာအောငျ ဘယျလိုမြိုးလုပျဆောငျကွမလဲဆိုတာက အရေးကွီး ပါတယျ။ ဒီလိုအကောငျအထညျဖျေါရာမှာ တဈဦးနဲ့တဈဦး ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးရမယျ ၊ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးရာ မှာလညျး ကြှနျတျောတို့မှာ ပညာပွညျ့ဝနဖေို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ပွညျ့ဝတယျဆိုတဲ့နရောမှာ ဘယျသူမှတော့ ရာနှုနျးပွညျ့မပွညျ့ဝပါဘူး။ လုပျရငျးကိုငျရငျးနဲ့ဖွညျ့သှားရတာပါ။ စာတှမြေားမြား ဖတျဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ အနှဈခြုပျအနနေဲ့ စုစုစညျးစညျးနဲ့ညီညီညှတျညှတျလေးလုပျကွရငျ အွောငျမငျတဲ့ပရော့ဂကျြလေးတဈခု ဖွဈသှားမှာပါလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ.။
Foundabug? Please, open new issue .